हटेर होइन ! डटेर स’मस्याको सामना गर्नुहोस् – भगवान श्रीकृष्ण – Life Nepali
हटेर होइन ! डटेर स’मस्याको सामना गर्नुहोस् – भगवान श्रीकृष्ण
काठमाडौं। भगवान श्रीकृष्णलाई विष्णु भगवानको अवतारका रुपमा लिइन्छ । उनै भगवान श्रीकृष्णलाई नीतिज्ञ, शक्तिमान, वौद्धिक, तार्किक क्षमतावानका हिसावले सर्वश्रेष्ठ पनि मानिन्छ ।यतिमात्र होइन, श्रीकृष्णलाई निकै रसिक पात्राको रुपमा चित्रित गरिन्छ । १६ सय गोपिनीहरुको सारी लुकाउनेदेखि राधासँगको सम्बन्धमा पनि उनको भूमिका निकै रसिक मानिन्थ्यो । हिन्दू धर्म ग्रन्थका अनुसार, उनमा अरुलाई प्रेरित, प्रोत्साहित गर्न सक्ने अलौकिक क्षमता थियो ।
यहाँ हामीले तिनै श्रीकृष्णका केही बाणीहरु प्रस्तुन गरेका छौं । जुन तपाईंको जीवनका लागि पनि उपयोगी बन्न सक्छन् ।
कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले नै रणनीति तयार गर्नुस् ।– यदि बिरोधीहरु सक्रीय बने या बलिया बने भने त्यो अवस्थामा विजय प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले कुटनीतिको बाटो अपनाउनुपर्छ ।– कहिल्यै पनि अरुको बिचारको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन, बरु तपाई स्वंम बिचार विकसित गर्नुहोस् ।– साँचो मित्रता चाहनुहुन्छ भने गरिब र धनीको भेद नगर्नुहोस् । बरु, इमान्दारी र सत्यताको भने सधैं ख्याल गर्नुहोस् ।–
तपाईंमा दुरदर्शीता र हरेक परिस्थितीको आकलन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । स’मस्यासँग हटेर होइन, डटेर सामना गर्नुहोस् । – अस्तव्यस्त होइन, सँधै अनुशासित जीवन जिउनुहोस् अनि व्यर्थको कुरालाई लिएर कहिल्यै पनि चिन्ता नगर्नुहोस् । बर्तमानमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्नुहोस् ।सँसारमा अचम्म अचम्मका मानिसहरु भेटिन्छन् । सँचारको माध्यमले अचम्मको कला व्यक्ति भएकाहरुको कला अहिले लुकेर बस्न पाउँदैन । मिडियामा आईहाल्छ ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय थुप्रै कला भएका व्यक्तिहरुको भिडियो युटुब लगायतका सामाजिक सन्जालहरुमा भाईरल हुने गरेका छन् । यस्तैमा स्टार न्युज नेपालका रबिन पौडेलले अर्को अचम्मका व्यक्तिको भिडियो ल्याए । बाईक, कार, कार लगायतका सबै गाडीहरुलाई जुरुक्कै उचाल्ने रबिन हैजुको कला अचम्मको छ । उनी काँधमा जुरुक्कै बाईक बोक्छन् । कार र ट्याक्सी दुई हातले उचाल्छन् । उनको यो कला देख्दा सबै चकित पर्छन् । अर्को रोचक कुरा त के भने रबिन मात्र १८ बर्षका भए । आखिर कसरी यो सम्भव भयो त ?
Previous गोलीको घा’उ भन्दा बोलीको घा’उ निकै दर्दनाक हुन्छ’ – सत्य साईबाबा’
Next एका बिहानै पथिभारा माताको दर्शन गरी : आजको राशिफल पढ्नुहोस् !
निसन्तान सन्तान दिने, राम्रो जोडी मिलाइदिने यक मात्र भगवान्, दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन गरि भेटी स्वरुप ॐलेखी एक शेयर गर्दै महिमा पढ्नोस…
4 days ago kriti
मनकामना माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन, पौष २९ गते बुधबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
आज तपाईंको भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुस् राशिफल
6 days ago kriti
दु’खद खबर, १८ वर्षीया युवती रेखा मृ’त फे’ला
8 hours ago Life Nepali
21 hours ago Life Nepali
24 hours ago Life Nepali